Imininingwane emi-4 yangaphakathi ezokwenza igumbi lithokomele - Indlela yokuphila 2022
Imininingwane emi-4 yangaphakathi ezokwenza igumbi lithokomele
Isibani sasebusuku noma isibani
Igumbi lokulala alinakho ukukhululeka?
Uma ufuna ukwenza igumbi lakho lokulala likhululeke, kufanele unake izinto ezinjalo zangaphakathi: amakhandlela, ikhaphethi nokukhanya kwasebusuku, kanye nemithwalo yokuhlobisa.
Ngaphambili, ukhaphethi, noma okungcono nakakhulu - eziningana, kwakuyingxenye ephoqelekile yangaphakathi. Ngenxa yezinkumbulo zobuntwana ezihlobene nokhaphethi abanephethini ezindongeni, abaningi baye bayishiya ngokuphelele imininingwane enjalo yangaphakathi, kodwa kwaba yize. Umbhoxo wemvelo ngemibala ehlakaniphile ungaba isici esilahlekile esizoletha induduzo ekamelweni.
Okhaphethi abaqinile benza ikamelo lokulala libukeke lipholile futhi lingaphansi.
Nokho, ungakwazi ukuhlola imibala, kodwa awekho amaphethini asebenzayo!
Ukukhanya ebusuku kubhekwa njengemfanelo yekamelo lokulala lezingane, ngoba lisetshenziswa lapho izingane zisasaba ukulala ebumnyameni. Kodwa ukukhanya kokukhanya ebusuku noma isibani esizodala isimo esizolile nesifudumele kunoma yiliphi igumbi lokulala.
Izibani zasebusuku ziza ngazo zonke izinhlobo nosayizi.
Phonsa imicamelo ingumqondo omuhle kakhulu wokwenza igumbi lakho lokulala likhululeke nakakhulu. Zingcwabe emicamelo enemibala futhi ufunde izincwadi zakho ozithandayo, bukela uchungechunge lwe-TV oluthakazelisayo ngemva kosuku olunzima emsebenzini - uzoqonda ukuthi yini induduzo.
Khetha imicamelo ngokwemibala yekamelo lakho lokulala.
Ifilosofi yaseDenmark yokuphila "hygge" imane ibophezele wonke umuntu ofuna ukuthola umoya omnandi futhi okhululekile endlini ukuba abe namakhandlela amaningi. Yile mininingwane yangaphakathi ezosiza ukugcwalisa igumbi lokulala ngokufudumala. Ngaphezu kwalokho, amakhandlela ayasiza ngobusuku bezothando nozakwethu.
Faka amakhandlela ajwayelekile ngezinti zamakhandlela zoqobo futhi "adlala" ngendlela entsha.
Imibuzo emi-5 ephezulu okufanele abantu abashadile bazibuze yona ngaphambi kokuba babe nomntwana
Ukuhlela umntwana kuyiphuzu elibalulekile. Akufanele ulungele kuphela ngokomzimba, kodwa, okokuqala, ngokwengqondo. Ukuze uqonde ukuthi umbhangqwana usulungele yini ukugcwaliswa kabusha, kunemibuzo emihlanu ebalulekile okufanele uyibuze
Isitayela: ungakuhlukanisa kanjani ukubukeka kwakho emizuzwini emi-5
Ezweni lezemfashini, kunezindlela ezithile ezilula ezingakwazi ukuhlukanisa isithombe se-laconic ngesitayela nesiphelele. I-Blogger kanye nomethuli uMarina Aristova wabelane ngeseluleko sakhe esisebenzayo
IMIBUZO EMI-4 OKUMELE abashadile bazibuze yona ngaphambi kokuba babe nezingane
Izingane zishintsha izimpilo, kodwa ngazo ungaqhubeka uthuthukisa futhi wenze lokho okuthandayo. Kodwa ngalezi zinto ezi-4 kungcono kwabashadile bakuthole ngaphambi kokuba kuvele umntwana. Phela uma umzali ejabule, nengane iyajabula
Uzinakekela kanjani izandla zakho uma kubanda ngaphandle: Imithetho emi-3 elula
Ebusika, izandla zidinga ukunakekelwa okukhethekile okuzozivikela emiphumeleni yokushisa ngokweqile, isithwathwa nomoya. Indlela yokunakekela kahle izandla zakho ebusika - funda endabeni yethu
Imithetho emi-5 yokuthi ungadla kanjani emva kwama-30 ukuze ungakhuli
Iminyaka engu-30 iyinkathi yoshintsho, kokubili ekuphileni nasekudleni. Yini okufanele uyibheke ngemuva kwe-30 - funda kundaba yethu